Magaalo xeebeed dhulka ka hoos martay oo ku taalla Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Magaalo xeebeed dhulka ka hoos martay oo ku taalla Soomaaliya
Degaan xeebeed dhaca aagga Garacad ee Gobolka Mudug, dhanka Maamulka Puntland, ayaa qarka u saran inuu dhamaantiis dhulka ka hoos-maro, sababo la xariira bacaad aan laga hor tagin oo magaalada duugay.
KULUB, Soomaaliya - Waa macquul in aad aqriso sheeko dhigaaleed la xariirta, tuulooyin carbeed oo ku yaallay lama dagaanka, (Saxaraha) kuwaas oo bacaad aawgii dhulka ka soo maray, hayeeshee waligaa ma maleysay in aad arkeysid magaalo ku taalla Soomaaliya oo dhamaan dhismaheeda ay ka kor martay ciid.
Tanni waa magaalada KULUB, oo dhacda gobolka Mudug, taas oo u sheeko eg (Magaaladii Dahabiga) ee ku taallay Masar, waa degaan xeebeed wax ka yar labaatan Kiiloo-mitir, u jira Garacad, degmo ahaanna hoos harsada Jariiban.
Kadib Sunaamidii 2004, dadka deggenaa degaanka oo kaabiga ku hayay xeebta ayaa la raray, si ay uga badbaadaan duufaan kale oo ka dhalata dhul gariir badda gunteeda ka dhaca, waxaana la dajiyay dhul hoose oo khatar ugu jiray inuu buuro isku badelo, taas oo ahayd aqoon la’aan heysatay Injineeradii dhidibada u taagay magaalada.
Nasiib-xumo dadkii dhibaatada biyaha ay saameysay 16 sano ka hor, mar kale, waxa ay wajaheen dhibaato aan dhamaad lahayn, taas oo sababtay ka barakac bacaad aan cidi celin karin.
Guud ahaan magaalada waxaaa qariyay bacaad ka soo rogmaday xaaniga xeebta, kaas oo qasab ka dhigay in guud ahaan laga diga-rogto degaanka, kadib markii ay noqotay saxaro, dabeysha iyo daranyadu daris la yihiin.
Nolosha magaalada oo dhan ayaa baaba’day, biyaha oo ah waxa ugu mihiimsan, ayaana laga doonaa degaan ku dhawaad Shan Kiiloomitir u jira Kulub.
Daaqsintii ayuu bacaadku dabar gooyay, isku socodkii ayaa istaagay, dadka degaanka ayaa dalbanaya gargaar degdeg ah si looga daba-tago dhibka garay.
Waa degaan dadkiisi iyo Doowladdiisba dayaceen, waa magaalo markii hore lagu dhisay deeqo ay bixiyeen hay’ado caalami ah, si loo marasheexo shacab u darbanaa dabaylihii 2004 ku dhuftay xeebaha Garacad, xilligaas kadibse aan wax xaq iyo xuquuq ah helin.
Puntland, wax bacaad celin ah kama sameyn degaanka, waxaana magaaladaas badbaadin karay wax ka yar Kun geed, oo laga hortago bacaadka, sidii la sameeyay xilligii baacaad celintii Shalaanbood.